देउवाको तयारी : आफैँ लड्ने, निधिलाई नेतृत्व नदिने - Pura Samachar
देउवाको तयारी : आफैँ लड्ने, निधिलाई नेतृत्व नदिने
उपसभापति निधिले देउवाकै सहयोगमा आफू आशन्न महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवारीको तयारीमा लागेको भन्दै देउवालाई जसरी पनि सघाउन आग्रह गरेका थिए । उनले १३ औं महाधिवेशनमा आफूलाई दिएको ‘वचन’ पनि भेटमा स्मरण गराएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, निधिले आफूले पार्टीको आगामी नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसलाई बलियो शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउने सोच बनाएर आगामी नेतृत्व सहमतिमा चयन हुनुपर्ने उनले आशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सभापति देउवाका विश्वासपात्र मध्येका एक केन्द्रीय सदस्यले पनि उपसभापति निधिका लागि बाटो खाली गर्ने कुनै सम्भावना नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “हाम्रो समूहबाट सभापतिजी निर्विकल्प हो भन्ने थियो । विमल दाइ (निधि) को कदमले अब निर्विकल्प रहनु त भएन,” ती नेताले भने, “आजका मितिसम्म सभापतिले विमल दाइलाई छोड्ने भन्ने कुरो रत्तिभर पनि सम्भावना छैन ।”
“सभापतिकै निरन्तरताको कारण के ? छोड्नुपर्ने तर्क राख्ने कारण के ? छोड्दा उहाँलाई नै छोड्नु पर्ने तर्क के ?,” ती नेताले भने, “ग्रास रुटको भावना के छ ? अर्को व्यक्ति नेतृत्वमा किन आउनुपर्‍यो ? आउँदा उहाँ (निधि) लाई नै किन बनाउनुपर्‍यो ? यसका बारेमा टिममा रहेका महत्वपूर्ण नेताहरु बसेर सरसल्लाह गरिनुपर्छ ।”
कार्यतालिका नै प्रभावित हुन सक्छ महाविधेशनको ?
कोभिड–१९ महामारीले कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनका लागि परिमार्जन गरिएको कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । महामारीका कारण कांग्रेसले परिमार्जित कार्यतालिकाअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गत असार २२ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको अन्तिम मिति यथावत राखेर अन्य तल्ला तहको अधिवेशन तालिका परिमार्जन गरेको थियो । जसअनुसार पार्टीका आन्तरिक संरचना समायोजन, क्रियाशिल सदस्यता वितरणको समयावधि पनि परिमार्जन भएको थियो ।
नयाँ कार्यतालिकाअनुसार कांग्रेसले समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरी सक्नु पर्ने अन्तिम अवधि साउन १० गते तोकेको थियो । तर, कांग्रेसले अझै ११ जिल्लामा अन्तरिम संरचना समायोजन गर्न बाँकी छ । यस्तै विधानले तोकेको कार्यविधिबमोजिम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नविकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि असार २५ देखि साउन मसान्तसम्म निर्धारण गरेको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले कोभिड–१९ महामारीका कारण गत असार २२ गते परिमार्जन गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई पुनःसंशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ । कार्यालयले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर कार्यतालिकालाई संशोधन गरिने पनि जनाएको छ । फागुनमा महाधिवेशन गर्न सम्भव नभए सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशन छ महिना पछाडि धकेल्ने अड्कल कांग्रेसवृत्तमा चलेको छ ।
संस्थापन पक्ष पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौमा गर्ने मनसायमा देखिएको छ भने इतर समूह आगामी जेठभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । आशन्न महाधिवेशनका लागि दुबै समूहमा गरी झण्डै एक दर्जन नेताहरुले सभापति पदका लागि आकांक्षा राखेका छन् । जसमा वर्तमान सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत, अर्जननरसिंह केसी, प्रकाशमान सिंहलगायतका नेताहरु रहेका छन् ।